Sina: Mpampianatra lalàna iray amidy … · Global Voices teny Malagasy
Sina: Mpampianatra lalàna iray amidy …	Voadika ny 19 Septambra 2010 19:32 GMT
Zarao: Tamin'ny herinandro lasa iny, nivezivezy eran'izao tontolo izao tany anaty sehatra fitorahana bilaogy kiritika tany ity sary eto ambany ity.
Tamin'ny 3 Septambra no nakàna ny sary tao Beijing. Eo amin'ny sary, ny Profesora Yang Zhizhu avy ao amin'ny Anjerimanontolo Fianarana ny Siansa Politika ho an'ny Tanora ao Sina dia nihazona takelaka iray hilazany fa amidiny ho andevo ny tenany ho fanonerany ny nandikàny ny politikan'ny zaza tokana:
Ilay sary dia tantara mampiasa loha eny an-dalambe mba hanairana ny sain'ny rehetra manoloana ny lalàna henjana loatra mikasika politikan'ny zaza tokana sy ny ‘saram-panabeazana ara-tsosialy’. Nanapa-kevitra ny handeha eny amin'ny fitsarana hitory ny komity miandraikitra ny fandrindrana fiainam-pianakaviana avy amin'ny distrikan'i Haidian i Yang. Raha voalazan'ny “Fitsipiky ny Saram-panabeazana ara-tsosialy” navoaka tamin'ny 2 Septambra 2010, ilay sara 240,000 yuan dia nokajiana avy tamin'ny fampitomboana in-tsivy ny totalim-bola miditra aminy isan-taona:
i Yang dia nandefa famintinana resadresaka iray nifanaovany tamin'ny T.V tao amin'ny bilaoginy tamin'ny 7 Septambra mba hanazavany ny tena fototra ijoroan'ny dingana ara-pitsarana nataony:
Nahasarika fanohanana maro teo anivon'ny aterineto ny hetsika nataon'i Yang. Ao anatin'ny toerana fametrahana fanamarihana ao amin'ny bilaoginy, i feichujisheng da niteny fa:
Ao amin'ny fitorahana bilaogy kiritika sina, ny iray tamin'ireo fanapariahana dia nisy namerina nandefa in-3611, mitondra fanamarihana i 1358:
@韩浩月: Misy resaka mahatsikaiky mampalahelo momba ny “saram-panabeazana ara-tsosialy”: misy raiamandreny namoy ny zanak'izy ireo faharoa tamina loza tato anatin'ny herintaona eo ary nangataka tamin'ny komitin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana mba hamerina amin'izy ireo ny vola satria tsy mila intsony izay resaka ‘fanabeazana ara-tsosialy’ ilay zaza. Namaly ny komity fa tsy misy mihitsy didy milaza fa tokony haverina ny vola (lamandy). Izany no atao hoe mitelin-kena miaraka amin'ny taolana! Mba fanalàna hamohamo tsy misy fotony! (05:18 Sep 11)
Ny hetsik'i Yang dia nifanandrify tamin'ny namotsorana an'ilay mpisolovava malaza tsy mikiraro mpiaro zon'olombelona Chen Guangcheng, izay nanokan-tena hiady hiaro ny zo hanan-janaka any amin'ny faritra ambanivohitr'i Sina. Voaheloka 4 taona sy 3 volana ho any am-ponja i Chen ary mbola araha-maso taorian'ny famotsorana azy tamin'ny 9 Septambra. Ao anatin'ny lisitra maintin'ny ankabeazan'ireo lohamilima fikarohana ao an-toerana ny anarany. Kanefa kosa, nanome tsirin-kevitra ho an'olona marobe ireo hetsika nataony ary i Yang dia isan'ny iray amin'ireo mpanaraka azy akaiky.
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Italiano, Español, English